စင်ကာပူရောက် မြန်မာအိမ်ဖော်တွေအရေး စစ်ဆေးကြဖို့လိုပြီ
လအတန်ကြာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရ သော်လည်း မည်သည့်လခမျှ မရ သည့် မြန်မာအမျိုးသမီးအိမ်ဖော်တို့ စင်ကာပူအိမ်ရှင်များထံမှ ထွက်ပြေး နှုန်းမြင့်တက်လာလေတော့သည်။အခြား အကြောင်းတစ်ရပ်မှာ လည်း စင်ကာပူရှိ အလုပ်အကိုင်ရှာ ဖွေရေးအေဂျင်စီများကို ပေးရန်ရှိ သည့် ကြွေးများပေးပြီးနောက် အချို့ မှာ လခမကျန်တော့ခြင်း၊ အချို့မှာ ဆယ်ဒေါ်လာ၊ ဒေါ်လာနှစ်ဆယ်မျှ သာ ကျန်ကြတော့ခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။စင်ကာပူ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေ ရေးအေဂျင်စီများ၏ ခန့်မှန်းချက် အရမူ စင်ကာပူတွင် မြန်မာအမျိုး သမီးအိမ်ဖော် ၂၇ဝဝဝ မျှရှိကြသည် ဆို၏။ ယင်းတို့အနက် ၇ဝဝဝ ခန့်တို့ မှာ ယမန်နှစ်ကမှ ရောက်လာကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။မြန်မာအမျိုးသမီး အိမ်ဖော်များ စင်ကာပူသို့ ရောက်လာကြခြင်း ကြောင့် အင်ဒိုနီးရှားအိမ်ဖော်များကို ငှားရမ်းမှုနှုန်း အတန်ငယ်လျော့ ကျသွားခဲ့သည်။ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကလည်း ထွက်ပြေးလာကြသော မြန်မာအမျိုး သမီးအိမ်ဖော် ၃၂ ဦးတို့အား စင် ကာပူနိုင်ငံ လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားရေးအဖွဲ့က ကယ်တင် ထားခဲ့ရသေး၏။
ထို့ထက် နှစ်ဆများ သော ထွက်ပြေးလာသူတို့ကို ယင်း အဖွဲ့ကပင်လျှင် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်က စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းပေးခဲ့ရသေး သည်။အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးကိုယ်စားလှယ်များကမူ ယင်းအိမ်ဖော်များ သည် ကိုယ်ကျင့်တရား မကောင်း ကြကြောင်း သူတို့ကိုပေးရန်ရှိသည် များကို မပေးကြကြောင်း ပြောကြ ပြန်၏။ သူတို့သည် အလုပ်အကိုင်ရှာ ဖွေရေးအေဂျင်စီများအား ဒေါ်လာ ၃၂ဝဝ မှ ၃၃၆ဝ ကို ရှစ်လအထိ ခွဲ၍ပေးကြရသည်။”စင်ကာပူက မြန်မာအမျိုးသမီး အိမ်ဖော်တွေဟာ တစ်လကို ဒေါ် လာ လေးရာ၊ လေးရာကျော်လောက် ပဲရကြပါတယ်။ အင်ဒိုနီးရှားအိမ်ဖော် တွေ ဖိလစ်ပိုင်အိမ်ဖော်တွေထက် ဈေးချိုပါတယ်”ဟု စင်ကာပူနေ မြန် မာတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယင်းမှာ အသက်မပြည့်သေး ခြင်း၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုမရှိခဲ့ သဖြင့် အရည်အချင်း မပြည့်မီခြင်း၊ အင်္ဂလိပ်လို မ ပြောတတ်ခြင်း နှင့် စင်ကာပူ ဝယ် အလုပ်အ ကိုင်ရှာဖွေရ ခက် ခဲခြင်းတို့ ကြောင့်ဖြစ် ကြောင်း အိမ်ဖော် ပွဲစားများက ပြောပါ သည်။ ”မြန်မာနိုင်ငံက အေးဂျင့်တွေက သူတို့ ရမယ့်ဝန်ဆောင်ခတွေ ကို ပိုတောင်းတာတွေရှိ တယ်။ ဒီဘက်က အင်ဒို နီးရှားအေးဂျင့်တွေနဲ့ အငြင်းပွားကြ တာတွေကြုံရတယ်”ဟု စင်ကာပူ နိုင်ငံ အလုပ်သမားအေဂျင်စီများ အဖွဲ့မှ ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စကေဂျာယာပရီမာ က ပြောပါသည်။”တခြား အပိုဆောင်းပေးရတာ တွေလည်း ရှိသေးတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာအေးဂျင့် တွေရဲ့ ဝန်ဆောင်ခမြင့်မားနေတာကို တစ်ခုခုစီစဉ်ပေးဖို့ လိုတယ်” ဟု လည်း သူက ပြောပါသေးသည်။
”အိမ်ဖော်တွေကို ဈေးချိုချိုနဲ့ ငှားထားတယ်ဆိုရင်၊ သူတို့တတွေ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ အလုပ်ကြိုးကြိုး စားစား လုပ်ကြဖို့ ဆွဲဆောင်ကြရ မယ်လို့အိမ်ရှင် တွေကို ကျွန်မ ပြောပြပါတယ်” ဟု စင်ကာပူ မှအလုပ်အ ကိုင်ရှာဖွေ ရေး ကိုယ် စားလှယ် ကာရင်း ချင် က ပြောပါ သည်။”ဘယ် လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ဒီအလုပ်ရှင် အလုပ်သမားကိစ္စ တွေကို သက်ဆိုင်ရာသံရုံးတွေနဲ့ညှိနှိုင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးစရာရှိ စုံစမ်းပြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်”ဟု စင်ကာပူနိုင်ငံ ပြည်သူ့အင်အားဝန် ကြီးဌာနမှ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး က ပြောသည်။
စင်ကာပူတွင် လမ်းညွှန်ချမှတ် ထားသည့် ဥပဒေများနှင့် မညီညွတ် သော အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးကိုယ် စားလှယ်များကို ဒဏ်ငွေ ၅ဝဝဝ(သို့) ထောင်ဒဏ်ခြောက်လအထိ အပြစ် ပေးနိုင်ပြီး၊ ထောင်ဒဏ် ငွေဒဏ် နှစ် ရပ်စလုံးကိုလည်း တစ်ပေါင်းတည်း အပြစ်ပေးနိုင်သည်။ ယင်းတို့အနေဖြင့် အသက် ၂၃ နှစ်ထက်ငယ်သော အိမ်ဖော်များကို အလုပ်ရှာဖွေမပေးရဟူသည့် စည်း ကမ်းချက်ကိုလည်း ပြဋ္ဌာန်းထား၏။ ယမန်နှစ်ကလည်း သတ်မှတ် ထားသည့် အသက်မပြည့်သော အိမ် ဖော်များကို အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပေး မှုဖြင့် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေ ဂျင်စီ ၇ ခုကို သတိပေးခဲ့ရဖူးသေး သည်။”မြန်မာအိမ်ဖော် အမျိုးသမီး တွေဟာ သူတို့နိုင်ငံကထွက်ပြီး ဒီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ဇောကြောင့် ဘယ်လိုစာချုပ်စာတမ်းမျိုးကိုမဆို သဘောတူတတ်ကြတယ်။ ခုလိုဖြစ် ရပ်တွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် မြန် မာ-စင်ကာပူ နှစ်နိုင်ငံက အစိုးရ အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ တိတိကျကျ စုံစမ်း စစ်ဆေးကြဖို့လိုတယ်” ဟု စင်ကာပူ ပြည်ထဲဝန်ကြီးဌာနမှ အမှုဆောင် အရာရှိ ဘရစ်ဂျက်တန်က ပြောပါ သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, April 10, 2013 Links to this post
နေပြည်တော်ရဲ့ အနောက်တောင်ဘက်ကို ဗဟိုပြုပြီး ငလျင်တွေ ဆက်တိုက်လှုပ်နေ
နေပြည်တော်ရဲ့ အနောက်တောင်ဘက်ကို ဗဟိုပြုပြီး အင်အား အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ ငလျင်တွေ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဆက်တိုက် လှုပ်ခတ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒဌာနရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် စာရင်းတွေအရ ယနေ့မနက် ငါးနာရီခွဲခန့်က နေပြည်တော်ရဲ့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၄၀ ခန့်အကွာကို ဗဟိုပြုပြီး အင်အား ၄.၇ အဆင့် (အင်အားအနည်းငယ်)ရှိတဲ့ ငလျင်တစ်ခု လှုပ်ရှားပါတယ်။ ယခုလ ၃ ရက်နေ့ ည ၁၁း၀၀ နာရီလောက်ကလည်း နေပြည်တော်ရဲ့ အနောက်တောင်ဘက် ၄၉ မိုင်ခန့်အကွာကို ဗဟိုပြုပြီး အင်အား ၅.၅ အဆင့် (အင်အားအသင့်အတင့်)ရှိတဲ့ ငလျင်တစ်ခု လှုပ်ရှားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လေးရက်လောက် က (မတ် ၃၁ ရက်နေ့)လည်း သပိတ်ကျင်းမြို့ရဲ့ မြောက်ဘက် ၂၅ မိုင်အကွာကို ဗဟိုပြုပြီး အင်အား ၄.၇ အဆင့်ရှိတဲ့ ငလျင်တစ်ခု လှုပ်ခတ်သွားကြောင်း မော်ဒန် ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, April 07, 2013 Links to this post
ဧပြီ ၅ မှ ၁၃ ရက်နေ့ထိ စက်ရုံများ၊ စက်မှုဇုန်များနှင့် လုပ်ငန်းများ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်မည်
လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလုပ်ငန်း ဓာတ်ငွေ့၊ ရေနွေးငွေ့ဌာန အောက်ရှိ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ဓာတ်အားပေး စက်ရုံများကို စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးပို့နေသည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေ ၁၆၅ သန်းခန့် လျော့နည်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု ၃၃၀ မဂ္ဂါဝပ် လျော့နည်းမည် ဖြစ်ရာ စက်ရုံများ၊ စက်မှုဇုန်များတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများသို့ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှု ဧပြီ ၅ မှ ၁၃ အထိ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရတနာဓာတ်ငွေ့ ကမ်းလွန်တူးစင်၏ ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်း အထွေထွေပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဧပြီ ၅ ရက်နေ့မှ ၁၃ ရက်နေ့အထိ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ရာ နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိက စက်ရုံများ၊ စက်မှုဇုန်များ၊ အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများကို ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး ရပ်ဆိုင်းထားမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ပြည်သူလူထုကို ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးအတွက် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး ကုန်းတွင်းသဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုမိုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပြီး သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံက ဓာတ်အားတိုးမြှင့် ဖြည့်ဆည်းမောင်းနှင်ခြင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေး စက်ရုံများက ဓာတ်အားတိုးမြှင့် ဖြည့်ဆည်း မောင်းနှင်ခြင်းများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသို့ဖြစ်၍ အချို့နေရာများတွင် အလှည့်ကျ ဓာတ်အားလျော့ချပြီး ပို့လွှတ်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကမ်းလွန်ပလက်ဖောင်း ပြုပြင်စဉ် အခိုက်အတန့် ကာလအတွင်း ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချွေတာသုံးစွဲခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းကူညီ ဆောင်ရွက်ကြပါရန် လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနက အသိပေး နှိုးဆော်ထားကြောင်း News Watch Weekly ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ "
ဂူဂဲလ်ဒေါ့ကွမ်း ဒေါ့အမ်အမ် မြန်မာလို ဖြော်ပချက်နဲ့ ပြောင်းလဲလာ
ဂူဂဲလ်ကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ google.com.mm မှာ မြန်မာစာနဲ့ အသုံးပြုလို့ရပြီး မြန်မာလို ဖော်ပြချက်တွေနဲ့ ပြောင်းလဲပေးလိုက်တာကို တွေ့ရတယ်။ google.com.mm ရဲ့ search ဘောက်စ်ရဲ့ အောက်မှာ မြန်မာဘာသာကို နှိပ်လိုက်ရမှာပါ။ ရှာဖွေခြင်း၊ ပုံဖြင့်ရှာပါ၊ မြန်မာလို ဖော်ပြချက်တွေနဲ့ ရေးသားထားပြီး search ဘောစ်ရဲ့ အောက်မှာ google တွင် ရှာပါ။ ဥုံဖွ စသဖြင့် ရေးသားထားပါတယ်။ အလွယ်တကူ ရှာလို့ရအောင် ကီးဘုတ်အနေနဲ့ Input Tools ကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ google.com.mm မှာ ယူနီကုတ် ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ MIDO မှ ပရိုဂရမ် မန်နေဂျာ မထိုက်ထိုက်အောင်က ‘ဂူဂဲလ်သုံးရင် တခြားနိုင်ငံတွေက သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေ ရှိတယ်၊ ခုချိန်မှာတော့ ဂူဂဲလ်က အရင်ကထက်စာရင် မြန်မာနိုင်ငံကို အသိအမှတ်ပြုလိုက်တဲ့ သဘောပဲ၊ နောက်ပိုင်း တခြားဝန်ဆောင်မှုတွေ လုပ်ရလဲ ဒီနိုင်ငံမှာ သုံးလို့ရအောင်ပါ ထည့်သွင်းပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ရတယ်’ ဟု ပြောပါတယ်။ မြန်မာစာနဲ့ ရှာဖွေလို့ရတဲ့အတွက် ဘာသာစကား အခက်အခဲ မရှိတော့ဘူး။ အင်အားကြီးတဲ့ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုက ယူနီကုတ်ကို စံသတ်မှတ်ချက် တစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် တခြားကုမ္ပဏီတွေကပါ လိုက်သုံးဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ Tbit Solution မှ အိုင်တီဒါရိုက်တာ ကိုသက်အောင်မင်းလတ်က ‘ဒီလို မြန်မာလို အသုံးပြုလို့ရတော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ဂူဂဲလ် translate လိုမျိုးကို မြန်မာလို အသုံးပြုလို့ရဖို့တော့ လိုသေးတယ်၊ အဲဒါမျိုးတွေ လုပ်ပေးနိုင်ရင် ပိုပြီးအသုံးဝင်တယ်’ လို့ ပြောပါတယ်။ ဂူဂဲလ်ကုမ္ပဏီက google.com.mm ကို ဂူဂဲလ်ကုမ္ပဏီရဲ့ အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ Eric Schmidt မြန်မာနိုင်ငံကို မလာခင် မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့က လုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း မော်ဒန် ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ""
မဟာသင်္ကြန်ကာလ ကန်တော်ကြီး ကန်ပတ်လမ်း တစ်လမ်းမောင်းစနစ် ကျင့်သုံးမည်
ယခုနှစ် မဟာသင်္ကြန်ကာလ ကန်တော်ကြီး ကန်ပတ်လမ်းတစ်လျှောက် တစ်လမ်းမောင်းစနစ် ကျင့်သုံးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ အင်ဂျင်နီယာဌာန (လမ်းနှင့်တံတား)မှ သိရသည်။ ယခင်နှစ်ကအတိုင်း ကန်တော်ကြီး ကန်ပတ်လမ်းတွင် မဏ္ဍပ်အများဆုံး တည်ရှိပြီး ယခုနှစ်အတွင်း မဏ္ဍပ်ပေါင်း ၁၇ ခု ချထားပေးထားကြောင်း လမ်းနှင့်တံတားဌာနမှ သိရသည်။ ယင်းကြောင့် ကန်ပတ်လမ်းအား ယခင်နှစ်အတိုင်း တစ်လမ်းမောင်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးသွားလာစေမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်လမ်းများအား မူလယာဉ်လမ်းကြောင်းများ အတိုင်းသာ မောင်းနှင်စေမည်ဟု သိရသည်။ ကန်တော်ကြီး ကန်ပတ်လမ်းအား တစ်လမ်းမောင်းစနစ် ကျင့်သုံးစေရာတွင် ဦးထောင်ဘိုအဝိုင်းအတိုင်း ကန်ပတ်လမ်းမှ တစ်ဆင့် မင်္ဂလာဈေး စက်ရုံလမ်းဘက်သို့ တစ်လမ်းမောင်း ဝင်ရောက်ဖြတ်သန်းစေမည်ဟု သိရသည်။ ပြည်လမ်း၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ပါရမီလမ်း၊ ဆရာစံလမ်းနှင့် ကျန်လမ်းများအား လက်ရှိပုံမှန် သွားလာနေမှုများ အတိုင်းသာ အသုံးပြုစေမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းအပြင် ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်၌ လှည်းတန်း ခုံးကျော်တံတားကို သင်္ကြန်မတိုင်မီတွင် စတင်စမ်းသပ် မောင်းနှင်စေမည်ဖြစ်ရာ သင်္ကြန်ကာလ အတွင်း မော်တော်ယာဉ်များ အဆိုပါ တံတားပေါ်မှ ဖြတ်သန်း မောင်းနှင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မော်တော်ယာဉ်များ မောင်းနှင်ရာတွင် အရက်သေစာ သောက်စား မူးယစ်မောင်းနှင်ခြင်း မပြုရန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မတီတို့မှ သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်ထားပြီး ယာဉ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ စည်းကမ်းတကျ သွားလာမောင်းနှင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်ဟု ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ "
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်များ ဆီက မန်ယူအသင်းကိုစပွန်ဆာ ပေးခဲ့သော ကမ္ဘာအကြီးဆုံးဆက် သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော ဗိုဒါဖုန်းကုမ္ပဏီသည်မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ် ရန်အတွက် တရုတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းကာလိုင်စင် ၂ ခုအား လေလံဆွဲရန်ရှိနေသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
အိုင်ရမ်လူမျိုးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် များဖြစ်သောMr. Soros နှင့်Denis O’ Brien တို့က “ဆက်သွယ် ရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးလာမှုက မြန်မာ စီးပွားရေးကို လှုံ့ဆော်ပေးနေသလို ပါပဲ”ဟု ဆိုသည်။ ကမ္ဘာအချမ်း သာဆုံးပုဂ်္ဂိုလ် (၃၀) တွင် စာရင်း ပေါက်သောအဆိုပါပုဂ်္ဂိုလ်တို့က ကန်ဒေါ်လာ ၁၈.၂ ဘီလီယံသုံး စွဲရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားသည် ဟုသိရသည်။ လာမည့်ဇွန်လအတွင်း ၁၅ နှစ်စာစာချုပ်ကိုရရှိရန်အတွက် ကြေညာမည်ဟုလည်းဆိုသည်။ “ကမ္ဘာဆက်သွယ်ရေးဈေးကွက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကအသစ်တစ်ခုပါပဲ”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
သတင်း.... The Hot News
လစ်လပ်နေရာအားလုံးမှာ NLD ပါတီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် - လစ်လပ်နေရာအားလုံးမှာ NLD ပါတီ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် 27 May 2018 အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာ မျိုးညွန့် ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်...
အိုင်ဖုန်းအတွက် အခမဲ့ ringtone တွေကို ဘယ်လို download ယူမလဲ - Appleရဲ့ iTunesမှာ သီချင်းတွေကို Ringtone ပြုလုပ်နိုင်ပေမယ့် အကန့်အသတ်တော့ရှိပါတယ်။ iPhone ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံအမြောက်အမြား သုံးလိုက်ရတဲ့အပြင် ringtoneတွေ ဝယ်ဖ...
စင်ကာပူရောက် မြန်မာအိမ်ဖော်တွေအရေး စစ်ဆေးကြဖို့လို...
နေပြည်တော်ရဲ့ အနောက်တောင်ဘက်ကို ဗဟိုပြုပြီး ငလျင်...
ဧပြီ ၅ မှ ၁၃ ရက်နေ့ထိ စက်ရုံများ၊ စက်မှုဇုန်များနှင...
ဂူဂဲလ်ဒေါ့ကွမ်း ဒေါ့အမ်အမ် မြန်မာလို ဖြော်ပချက်နဲ့...
မဟာသင်္ကြန်ကာလ ကန်တော်ကြီး ကန်ပတ်လမ်း တစ်လမ်းမောင်းစ...